မနေနိုင်တော့ဘူးကွယ် – Grab Love Story
ကွန်တော် အဲဒီဘာသာကို ပထမ ဆုံး တက် ခွင့် ၇အောင် ကျွန်တော်တို ကျောင်းသားတွေ က လမ်းလျှောက်ရတယ်ဗျ…….အဲဒီနေ့ ကပေါ့ ကျွန်တော်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို တွေခဲ့တယ်…..ကောင်မလေးတွေကတော့ အများကြီးပါ …အဲ့ဒီအများကြီးထဲက မှ တစ်ယောက်သောသူကိုပြောတာပါ … သူနာမည်ကနှင်းအိဖြူတဲ့… ကျွန်တော်က အိန်ဂျယ် လို့ခေါ်တယ်ဗျ…။ သူ တော့ မသိလောက်ဘူးပေါ..ကျွန်နော့် စိတ်ထဲက နေချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်တဲ့နာမည်ပါ… ကျွန်နော် သူ့ ကို မြင်မြင်ချင်းပဲ စိတ်ဝင်စားသွားတယ် ဒါနဲ့ သူ့အကြောင်းတွေ လိုက်စုံစမ်းတယ် ..ဟုတ်တယ်လေ ..ေ.ကာင်မလေးတစ်ယောက်ကိုလိုက်တော့မယ်ဆို သူရဲ့ အကြောင်းကို အရင်စုံစမ်းထားရမယ်လေ…တစ်ချို့ က အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျ…ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းမလေး ကိုအရင်ခင်အောင်လုပ်ကြတယ် ..ပီးတော့ ခင်သွားပီဆိုရင်သူ့အကြောင်းတွေမေးတယ် … အဲ့လိုဇာတ်လမ်းခင်းကြတာ ကျွန်နော် တက်ကနစ်က တော့။
ကောင်မလေး အကြောင်းကို အရင်စုံစမ်းမယ် …သူရဲ့ အကြောင်းသိရင်လိုက်ရလွယ်သွားမယ်လေ… ခင်ဗျားတို့တော့ ကြိုက်သလိုပေါ့ဗျာ ကျွန်နော် ရဲ့ တက္ကနစ် ကိုပြောတာပါ.. ထားပါတော့ … ကျွန်နော် ကောင်မလေး အကြောင်းစုံစမ်းလိုက်တော့ ..လားး….လားးးးး သူက ကျွန်နော် တို့ မြို့ မှာ နေသွားဖူးတယ်လို့ သိရတယ် …ဘယ်လိုစုံစမ်းတယ်ဆိုတာတော့ မပြောတော့ဘူးဗျာ … သူကနယ်စပ်ဘက်က လာ တာ ဗျ…..သူ ကအရင်က နယ်မှာကျွန်တော်တို့ နယ်မှာနေခဲ့တာ..သူကလဲကျွန်တော်ကိုမသိခဲ့ဘူးကျွန်တော်က လဲ မသိခဲ့ဘူး………အခုတော့ သူက လားရှိုးကိုပြောင်းသွားတယ်လို့ သိလိုက်ရတယ် …ကျွန်နော့် အတွက်က တော့ဂွင်ပေါ့ဗျာ … စလို့ရပီလေ ကျွန်နော့် အကြောင်းတွေချည်းပြောနေတာ ..သူ.့အကြောင်းလည်းပြောရဦးမယ် ..သူက ရှမ်းစပ်တယ် .. ဗမာလည်း ရောတယ်ထင်တယ် … အသားကတော့ ဖွေးနေတာပဲဗျာ …ပါးလေးတွေဆို ရဲနေတာ … အရပ်ကတော့ ငါးပေ လေးလောက်တော့ ရှိမယ် .. ။
ဆံပင်မတိုမရှည်လေး နဲ့ … စကားပြောရင် ပြုံးလိုက်ရင် အရမ်းချစ်ဘို့ကောင်းတဲ့ ကောင်မလေး ဗျာ … ခန္ဒာကိုယ်လေး က ငါးရံကိုယ်လုံးလေးလို့ ခေါ်မလား…လုံးချောလေး လုံးဝန်းတဲ့ ရင်နှစ်မွှာက တီရှပ် အကျပ်လေးများဝတ်ထားလိုက်ရင် စနေနှစ်ခိုင် အပြိုင် တိုးထွက်နေတာ… ။ သူ့ရဲ့ တင်ပါးလေးတွေက နောက်ကို ဖောင်းဖောင်လေးဖြစ်နေတယ် …လုံချည်ဝတ်ထားရင်မသိသာဘူး … ဂျင်းဘောင်းဘီအကျပ်လေးများဝတ်ထားလိုက်ရင် မြင်တဲ့သူတိုင်း နှစ်ခါပြန်မကြည့်မနေနိုင်ဘူး … ကျွန်နော် ပြောတာ ကို မျက်လုံးထဲ မြင်ကြရဲ့လားမသိဘူးဗျာ …အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင် အဆိုတော် ရှင်ဖုန်းလို့ ခန္ဒာကိုယ် မျက်နှာပေးမျိုးပေါ့ …. သူ့ကိုစတွေ့လိုက်ပီးကတည်းက ကျွန်နော်ရင်ထဲမှာ အိန်ဂျယ် ဆိုတဲ့ကောင်မလေး က အမြဲလိုလို နေရာယူထားလိုက်ပီပေါ့…ကျွန်နော့် နှလုံးသားတွေ အိန်ဂျယ် နဲ့တွေ့တော့စတင်လှုပ်ရှားလာတယ်ဗျာ … …..သူကပွင့်လင်းတယ်.ရဲတယ်.ဖော်ရွေတယ် ..ဒါတွေကိုတော့နောက်မှသိခဲ့ရတာပေါ့……။
အဲ့တုန်းကသူကို ကျွန်တော် အလူးအလဲချစ်မိတာပေါ့… ကျွန်တော့် သူ့အကြောင်းတွေစုံစမ်းတာ တစ်လ ကျော်ကျော်လောက်ကြာသွားတယ် … သူနဲ့ မခင်သေးဘူး ..ခင်အောင်အစမပျိုးနိုင်သေးဘူးလေ …ကျွန်တော် ပဲ ကံကောင်းတာလားမသိဘူး သူ က ကျွန်တော်စာသင်ရတဲ့အခန်းမှာပဲသူလဲ၇ှိနေပြန်တယ်..သူနဲ့ ကျွန်နော် စာသင်ခန်းတစ်ခန်းတည်းချပေးတဲ့ ဆရာ/ဆရာမတွေကို ကျွန်နော် ကျိတ်ကျေးဇူးတင်နေမိတယ်…. တစ်နေ့ ကျောင်းက အပြန်မှာ ကျွန်တော် လိုက်စကားပြောတယ် …သူက အဆောင်မှာနေတာလေ …ကျွန်နော် စ စကားပြောဘိုလိုက်လိုက်ချင်းတော့ ရင်တုန်နေမိတယ် …သူရှေ့က ထွက်သွားတာ မြင်တော့ ကျွန်နော် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲက အပြေးလေးလိုက်သွားလိုက်တာလေ သူ့နားရောက်ခါနီးတော့ ကျွန်နော့် ရဲ့ ကျွန်နော် အချိန်လျော့လိုက်ပီးသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ် …။ ကျွန်နော် တံတွေးတောင် မျိုချလိုက်ရတယ် … ။
သူသာကြားနိုင်မယ်ဆို ကျွန်နော့် လည်ချောင်းထဲ က “ဂလု” ဆိုတဲ့အသံကိုကြားနိုင်လောက်တယ် … မဂလုပဲနေနိုင်ရိုးလား သူရဲ့နောက်ပိုင်းအလှကို နီးနီး ကပ်ကပ် ကြည့်လိုက်ရတာကို …ကျွန်နော်နေရာမှာ ကိုယ့်လူတို့ဆိုရင်လည်း ဘယ်လိုနေမလဲ တွေးကြည့်လိုက်ပေါ့ … လုံးဝန်းတဲ့ တင်နှစ်လုံးဟာ …တစ်လုံးစီ အပေါ်တက်လိုက် အောက်ကျလိုက်နဲ့ စည်းချက်ညီညီ ကနေကြတယ်လေ .. ကျွန်နော် ငယ်ငယ်က စီးခဲ့ဖူးတဲ့ ..ဆီးဆော့ ကိုတောင်အမှတ်ရလိုက်မိတယ်… “နှင်းအိဖြူ” ကျွန်နော့်ခေါ်သံကြားတော့ သမင်မလေးက လည်ပြန်လှည့်ကြည့်တယ်. ..ပီးတော့ သူမသိတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို မြင်လိုက်ရတော့ အံသြတဲ့ဟန်လေးနဲ့ “နှင်းအိဖြူ …ကျွန်နော် ဘူမိ ဆက်ရှင် ဒီက ..လေ.. ” “ဟုတ် …ဘာကိစ္စ ရှိလို့လဲမသိဘူးနော် ” “ဟို..အဲ့…ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး …ကျွန်နော် လာနူတ်ဆက်တာပါ ..ပီးတော့ နှင်းအိဖြူက ကျွန်နော်တို့ မြို့မှာနေဖူးတယ်လို့သိလိုက်ရလို့ လာနူတ်ဆက်တာပါ”။
“အော် ..သူက ဘယ်မြို့ကလဲ” “ကျွန်နော်က တောင်ကြီးကပါ … သစ်တောရက်ကွက်မှာနေတယ်လေ …” “အော် ..ဟုတ် ..ကျမလည်း ရှစ်တန်း အထိ တောင်ကြီးမှာနေခဲ့တာလေ …ဒါနဲ့ တို့ တောင်ကြီးမှာနေခဲ့ဖူးတယ်ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ” “အော် …ကျွန်နော် သိချင်လို့ တကူးတက လိုက်စုံစမ်းထားတာပါ” “အော်…” “ကျွန်နော့် နာမည် နေမင်း ပါ … ” “ဟုတ်” ဒီလိုနဲ့ ကျွန်နော် အိန်ဂျယ် ရဲ့ အဆောင် ရောက်တဲ့အထိ စကားတွေပြောပီးလိုက်သွားတယ် …အိန်ဂျယ် က ဖော်ဖော်ရွေရွေပါပဲ …စကားပြောရတာလဲ အဆင်ပြေတယ် ..ဒီလိုနဲ့ ကျွန်နော် နဲ့ခင်သွားကြတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ … ။ ကျွန်နော် သူ့အဆောင်ကို သွားလည်းနိုင်တဲ့အထိ အဆင်ပြေလာတယ် အဆင်ပြေလာတယ်ဆို လို့ ခင်ခင်မင်မင်နေလို့ရရုံလောက်ပါ..သူကို ပထမနှစ်မှာနည်းလမ်းနဲ့အမျူိးမျိူးကိုလုံးတယ်..ဗျ..ကျွန်တော်လေ တော်တော်ကို ရူးခဲ့တယ်……..လက်ဆောင်တွေဘာတွေကလည်း ဘာပေးရမှန်းမသိတဲ့အချိန်ပေါ့ ….။
နောက်တော့ ကျွန်နော် စဉ်းစားမိလိုက်တာ ကျွန်နော်က ကွန်ပျူတာ နဲနဲ ရတော့ ဗွိဒီယို တွေ ကို ပြင် သူ နာမည်တွေရေးနောက်ခံသီချင်းတွေထည့်ပေါ့….သီချင်းရည်းစားစာပေါ့…အခုခေတ်စားနေတဲ့ သီချင်းပုံစံလေးတွေပေါ့ ..အခုတော့ တော်တော်ခေတ်ထလာပါပီ … ဗွိဒီယို နောက်ခံသီချင်းလေးတွေနဲ့ စာသားလေးတွေ ရေးပီး ထည့်တာလေးတွေပါ … အဲ့လိုတွေလုပ်ပေးတယ်မရဘူး….ဘယ်လို့ပဲလုပ်လုပ်……….. သူက လှတော့ လိုက်တဲ့ ငနဲ့တွေ က များတယ်..နဲနဲ ဖြေလို့ရတာ တစ်ခုက သူ့ကိုလိုက်နေတဲ့သူတွေထဲက မှကျွန်နော် တစ်ယောက်ကို သာခင်ခင်မင်မင်အရှိဆုံးလို့ထင်ရတယ် …အဲဒါနဲ့ကျွန်တော် အမြဲတမ်းလိုက်ခဲ့တယ် လုံးတယ်လိုက်စကားပြောတယ်.မရဘူး ဒီလို့ နဲ့ ကျွန်တော် အဝေးကချစ်မယ်ပေါ့ဗျ.အချစ်သူ၇ဲ့ကောင်းပေါ့..ဟ.ဟ…ဟ…အဲတုန်း က ရီ၇တယ်ဗျ..ဒီလို့နဲ့ နောက်ဒုတိယနှစ်လဲကြတော့ ကျွန်တော် နဲ့ သူနဲ ပို အစဉ်ပြေလာတယ်ဗျ………။
အဲချိန်မှာကျွန်တော် မန်နေဂျာကလဲ တော်တော် ကို ဆရာဖြစ်နေခဲ့ပါပီ……သူနဲကျွန်တော် နဲ့ က အီတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ် ကျွန်တော်မှာလဲအဲအဆင့်လေးနဲ့ပဲကြေနပ်ခဲ၇တာပေါ့………သူနဲ့တော့ကျောင်းသွားကျောင်းပြန်ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းလေး ကို ရခဲ့တယ် သူ့အဆောင်ကလှည်းတန်းနားမှာ အဓိပတိကလဲကူညီတယ်ကျွန်တော်နဲ့သူကိုလေ နေတိုင်း သူနဲ့ကျွန်တော်ကို နေရာလေးတွေပေးခဲ့တယ်…….။ ဒီလိုလေးနဲ့ ပဲကျွန်တော် ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဗျ… သူကနယ်စပ်ဘက်က ဆို တော့ဗျ သောက်တာစားတာရှိတယ် …သူ မှာအဲအကျင့် က ၇ှိနေပြန်တယ်.ကျွန်တော် ကလဲ မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့အတိုင်း ပဲသောက်တဲ့နေရာမှာ က တော့သိတယ် မလားသောက်ခံတွင်းလိုက်လို့ က တော့အမုန်းဆွဲမယ်ဗုန်းကြဲမယ်ဆိုတဲ့လူစား အဲမှာစတွေတာပဲ ဇာတ်လမ်းက…………. ဇာတ်လမ်းအစ က ကျွန်တော် က ကျောင်းပိတ်လို့နယ်ပြန်သွားခဲ့တယ်..သူကတော့ ရန်ကုန်မှာပဲကျန်ခဲ့တယ်….။
ကျွန်နော်လည်းနယ်မှာ နှစ်ရက်လောက်ပဲနေခဲ့တယ် ပြီးတော့ ရန်ကုန် ပြန်လာ ခဲ့တယ်…..ရန်ကုန်မှာက ကျွန်နော် စိတ်ကြိုက်ကဲလို့ရတယ်လေ…သူနဲ့ ပြန်တွေချင်တာလဲပါတာပေါ့ …နယ်မှာကမလွတ်လပ်ဘူး…..ကျွန်နော် ရန်ကုန်ပြန်လာတဲ့နေ့မှာ ပဲ ကျွန်တော် သူကိုဖုန်းဆက်ခဲ့တယ်…………. သူ ပြောတယ် ဗျ “ဟဲ့ ဒီနေ့ ငါ လေ နင်ကို လာကြို မယ်တဲ့ “ ကျွန်တော် က လဲ ဂွင် ပေါ့..အေးပေါ့ လာကြို ပေါ့ ရန်ကုန် ကို သုံးနာရီ0လောက်မှရောက်တယ် သူ က အောင်မင်္ဂလာမှလာကြိုတယ် သူဘောင်ဘီတိုလေးနဲ့…ခြေသလုံးသားဖွေးဖွေးလေးတွေကို အခုထိပြန်မြင်ယောင်နေတုန်း ဒါနဲ့ ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ် ကို သူ ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ် ….အဲအချိန် မှာ ဘာ မှမဖြစ်သေးဘူး. ဖြစ်ချင်တော့ဒီလို့ဗျ………… သူညနေလဲစောင်းရောကျွန်တော် ပြောတယ် “ဟဲ့ ညနေ ဘီယာသောက်မယ်ဟာ ငါဒီနေ့ သောက်ချင်လို့ နင်တိုက်ရမယ်…….” “အေးသောက်တာပေါ့…ငါလည်း မသောက်ဖြစ်တာတော်တော်ကြာနေပီ”။
ကျွန်တော် က လဲတိုက်မယ်ပေါ့..အဲဒါနဲ့ကျွန်တော် လမ်းထိပ်မှာ ဘီယာသွားခဲ့တယ် ဒဂုံအနီဘီယာတဲ့ဗျ လေးလုံးဝယ်ခဲ့တယ်………သူကကန်ဘောင်မှာသွားသောက်ချင်တယ်ပြောတာနဲ့….ကျွန်တော် ကန်ဘောင်ကိုခြေဦးလှည့်လိုက်ကြတယ် ..သောက်တယ်။ သူနှစ်လုံးကိုယ်နှစ်လုံးသောက်တယ်မူးပီး စိမ်းလန်းကိုလစ်ခဲ့တယ်ဗျ.အဲမှာစတွေတာပေါ့အဲအချိန်မှာကျွန်တော် နဲ့သူ စကားပြောရင်းမူးပီခဏလောက်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်……..ကျွန်တော် နိုးလာခဲ့တဲ့အချိန် မှာ သူ က ကျွန်တော် ပေါ်ကို ရောက်နေတယ် အချိန် က လဲလွန်နေတယ်ဆယ့်တစ်နာရီလောက်ပေါ့…….အဲအချိန် မှာသူလဲအဆောင်ပြန်လို့မရတော့ဘူး…..ဒါနဲ့ မေးတယ်ဗျ .. သူကိုလေယုံလားဘာညာပေါ့….ကျားမာယာတွေလေ…ဟဟ…….သူလက်ခံတာနဲ့ ကျွန်တော် မ…လာတယ် ကိုရီးယာကားထဲကလို့ပေါ့…. ကုန်းပိုးပီးလမ်းမကိုထွက်လာတယ်………..ကားငှားပီးမြေနီကုန်းက ဟိုတယ်ကိုမလာတယ်ဗျ..အဲမှာပြဿာနာကတက်ပါလေရော……။
အဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့ဗျ ဘုန်းကြီးတွေကလဲတန်းစီလျှောက်နေတဲ့အချိန်လေ ဟို တယ်မှာ က မှတ်ပုံတင် မပါရင် အိပ်လို့မရဘူးတဲ့ ကျွန်တော်ကလဲထန်နေတဲ့အချိန်ပေါ့..ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ နဲနဲ အကြပ်ရိုက်သွားတယ်..နောက်ဆုံးမထူးတော့ဘူးဆိုပီး အိမ်မှာ မှတ်ပုံတင်ပြန်ယူဘိုပြန်ထွက်လာခဲ့ရတော့တယ်..အိမ်ကိုသူကိုခေါ်လာတယ်.ကကငှားပီအိမ်ပြန်လာတယ်….. ကားပေါ်မှာ သူက အိပ်ပီးလိုက်လာတယ် နောက်ခန်းထဲမှာ သူက ကျွန်နော် ပေါင်ကို ခေါင်းဦးအုံးပီးတော့ပေါ့ ကျွန်နော် က သူ့ခါးလေးပေါ်လက်ကလေး တင်ပီးမျက်နှာလေးကို ကြည့်လိုက်တယ် အမှန်ပြောရရင် မျက်နှာလေး က တော်တော်ဖြူဖြူစင်စင် ချစ်စရာလေးဗျာ …ပါးလေးတွေက ရဲနေတာပဲ ဘီယာအရှိနဲ့ ဆိုတော့ ပိုဆိုးသေး …သူ တော်တော် မူးနေပုံရတယ် .. သူ့ခန္ဒာကိုယ်လေး ကိုကြည့်လိုက်တော့ သူရဲ့ ဘောင်းဘီတိုအောက် က သလုံးသားလှလှနေ့ နဲ့ပေါင်တံစင်းစင်းလေး က ကွေးလို့ …..။
ကားနောက်ခန်းထဲမှာဆိုတော့ ခြေထောက်က ဆန့်မရတော့ ကွေးထားရတယ်လေ …ခြေထောက်က ကွေးထားတော့ တင်ပါးတွေက ပိုပီးနောက်ကို ထွက်နေတာပေါ့ …ကျွန်နော် လည်း ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ဘူး …ငပဲကလည်းဇွတ်ကိုထနေပီ ..တော်တော်အောင့်အီးထားရတယ် …ဘောင်းဘီအောက်ကငပဲက အတင်းရုန်းနေတာ အောင့်တောင်အောင့်လာတယ်။ ကျွန်နော်လည်း သူ့ရဲ့ပေါင်တံလေးတွေပေါ်လက်ကလေးနဲ့ မရဲတရဲ ပွတ်ပေးနေလိုက်တယ် …ရှေ့ က ကားဆရာ ရဲ့ အလစ်ကိုလည်းကြည့်ရသေးတယ် … ကားဆရာကလည်းနောက်ကို ဘက်မှန်ထဲက နေလှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်လုပ်နေတယ်လေ….ပေါင်သားလေးတွေက ချောနေတာပဲဗျာ …ဘာအနာအဆာမှမတွေရဘူး … သူလည်း သိတော့ သိတယ်ထင်ပါတယ် ..ကျွန်နော့် ရဲ့အထိအတွေ့ကို .. မှိန်းနေတာဖြစ်လောက်တယ်..နောက်တော့ သူ့ရဲ့တင်ပါးလေးတွေကို စမ်းကြည့်လိုက်တယ် ..ဘောင်းဘီပေါ်ကနေစမ်းရတာဆိုတော့။
အရသာတော့ သိပ်မရှိလှဘူး …ခြေထောက်ကွေးထားတော့ ဖင်လေးကတော့ တင်းနေတယ် … ကျွန်နော်လည်း အဲ့လောက်လေးပဲကိုင်လို့ရတယ် … ကားက အိမ်ရှေ့မှာထိုးစိုက်သွားတယ်..အိမ်ဆိုလို့ ကျွန်နော့် ဦးလေး အိမ်ပါ ..ကျန်ွနော် က ဒီမှာကျောင်းတက်တုန်းခဏလာနေတာ …ဦးလေးကလည်းအေးဆေးပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားတယ် ..ဘာမှမရှုပ်ရှယ်တော့ အဆင်ပြေတာပေါ့ …ထားပါတော့ ဒါနဲ့ ကျွန်နော်လည်းအိမ်ပေါ်ကမန်းကတန်းတက်ပီး မှတ်ပုံတင်ယူလိုက်တယ် …အရေးထဲမှ မှတ်ပုံတင်က တော်တော်ရှာလိုက်ရသေးတယ် …တောင်နေတဲ့ ငပဲတောင် ပြန်အိပ်ပျော်သွားတယ်….နောက်ဆုံးတော့ ကိုရွှေမှတ်ပုံတင်က ကုတင်အောက်ရောက်နေတာဗျာ …ကျွန်နော် လည်း မှတ်ပုံတင်ယူပီး ပြန်ဆင်း ကားဆရာကို နီးစပ်ရာတည်းခိုခန်းကို ပဲမောင်းခိုင်းလိုက်တော့တယ် …ခုန က ဟိုတည်ကို ပြန်နေရင်ကြာနေမယ် တည်းခိုခန်းရောက်တော့ အဲကွန်းခန်း တစ်ခန်းယူလိုက်တယ် အဆင်ပြေပါတယ် ..။
ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျက်ခန်းနဲ့ တီဗီလဲပါတယ် ကျွန်နော်လည်းရောက်ရောက်ချင်း သူ့ကို ကုတင်ပေါ်တင်ပေးပီးတော့ .ရေချိူးလိုက်တယ်……ရေကိုလန်းသွားအောင်ချိုး ပီးတော့ ကျွန်နော့် အောက်ပိုင်းကိုတဘက်ပတ်ပီးပြန်ထွက်လာလိုက်တယ် …သူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကွေးကွေးလေးအိပ်နေတယ်။ သူအင်္ကျေီ လးကလန်နေပီး ဘောင်းဘီတိုလေး ကလည်းအောက်မှာ ဟနေတယ်… သူ့ရဲ့အတွင်းခံ အမဲရောင်မျှော့ကြိုးလေးကပေါ်နေတယ် ကျွန်တော် ငပဲက လဲ သိတယ်မလား ချက်ချင်းကိုပြန်မတ်လာတယ်ဒီကောင်တော်တော်သစ္စာ၇ှိတယ်….. ကျွန်နော်လည်း ကုတင်ကိုတန်းသွားလိုက်တယ် ..ရေတောင် ကောင်းကောင်းပြောင်အောင်မသုတ်နိုင်သေးဘူး အခန်းထဲက အဲကွန်းလေအေးနေတာတောင် ကျွန်နော် ဂရုမစိုက်နိုင်အားတော့ဘူး … ကုတင်ပေါ်ရောက်တော့ သူ့ကို ကျွန်နော့ဘက်ဆွဲလှည့်လိုက်တယ် …အလိုက်သင့်ပဲ သူခန္ဒာကိုယ်လေး ပါလာတယ် …..။
ကျွန်နော်လည်း ချက်ချင်း သူ့နုတ်ခမ်းတွေကို ဆွဲစုပ်ပစ်လိုက်တယ် …ပထမတော့မသူမသိဘူး…နောက်တော့ မှ သူနိုးလာတယ်ထင်တယ် …ကျွန်နော့်ကိုလည်းပြန်ဖက်လာတယ် …ကျွန်နော့် ပါးစပ်ထဲကိုလဲ သူလျာလေးထိုးသွင်းလာတယ် ..သူလည်းဖီးတက်လာတယ်ထင်တယ် …ကျွန်နော့်လက်တွေကလည်း အငြိမ်မနေပါဘူး …အိန်ဂျယ် ရဲ့ပေါင်လေးတွေပေါ်မှာ ကစားနေလိုက်တယ် …တဖြည်းဖြည်း ကျွန်နော့်လက်က်ပါးလေးတွေပေါ်ကိုပွတ်လိုက်တယ် …ဘောင်းဘီတိုပေါ်ကနေပွတ်ရတော့အားတော့မရဘူး … ဘောင်းဘီတိုဆိုလို့ ပြောဘို့မေ့နေတယ် …အိန်ဂျယ် ရဲ့ ဘောင်းဘီက ဂျင်းပြာနုလေး ပေါ့ဗျာ ..ပေါင်လည်လောက်ထိပဲရှည်တယ် …အိန်ဂျယ် ရဲ့ပေါင်တံလှလှလေးတွေကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေး ဖုံးအုပ်ပေးထားတယ်…နောက်လက်တစ်ဖက်ကတော့ အိန်ဂျယ် ရဲ့ခါးကို သိုင်းဖက်ထားရတာပေါ့ …တဖြည်းဖြည်း နဲ့ သူနဲ့ ကျွန်နော့် ရဲ့ အနမ်းတွေက ကြမ်းလာတယ် …။
သူရဲ့ အသက်ရှုသံတွေလည်းပြင်းလာတာ ကျွန်နော်ကြားနေရတယ် …သူလည်းဖီးတက်နေတာ ကျွန်နော်သိလိုက်ပီလေ….သူက ကျွန်နော့် ကို ပြန်သာနမ်းနေတာ မျက်လုံးတွေက မဖွင့်သေးဘူး …သောက်ထားတဲ့ဘီယာအရှိန်ကတော့ ပြေချင်နေလောက်ပီ.. ဘီယာရှိန်ပြေကာစမှာပဲ ကာမစိတ်တွေက ပြန်တက်လာတာ ဘီယာထက်ပြင်းတဲ့ ကာမလှိုင်းကြားမှာ သူရော ကျွန်နော်ရော မူးဝေနေပီ …ဘာကိုမှမမြင်တော့ဘူး ….အခန်းထဲက အဲကွန်းရဲ့ အအေးဒဏ်လည်းမသိတော့ဘူး …ကျွန်နော့် လက်တစ်ဖက်က တင်ပါးတွေကို ပွတ်နေတာကနေ သူ့ရဲ့ နို့တွေပေါ်ကိုတင်လိုက်ပီးဆုတ်နယ်လိုက်တယ် …အောက်က ဘော်လီခံထားပေမယ် သူ့ရဲ့နို့တွေက တင်းနေမှန်း ကျွန်နော်ခံစားလိုက်ရတယ် …သူ့ရဲအနမ်းတွေကလည်းပြင်းလာပီး ကျွန်နော့်လျာကို အတင်းဆွဲစုတ်နေတော့တယ်…ခနနေတော့ ကျွန်နော့်လက်တွေကိုနေရာပြောင်းလိုက်တယ် အိန်ဂျယ် ရဲ့ ဘောင်းဘီဇစ်နားကိုရွှေ့လိုက်တယ် …။
ပြီးတော့ကျွန်နော် ကျွမ်းကျင်စွားပဲ လက်တစ်ဖက်နဲ့ ဘောင်းဘီ အပေါ်ကျယ်သီးလေးကိုဖြုတ်လိုက်တယ် … ကျယ်သီးပြုတ်သွားတော့ ကျွန်နော်ချက်ချင်းဘောင်းဘီဇစ်ကို မဆွဲချသေးဘဲ ဇစ်အပေါ်နားကနေ သူ့ ရဲ့ အဖုတ်လေး ရှိရာကို ပွတ်ပေးနေလိုက်တယ် .. အိန်ဂျယ် ရဲ့လက်တွေဟာ ကျွန်နော့် ကို တင်းကြပ်စွားဆွဲဖက်နေတယ် …သူ့အဖုတ်လေးရှိရာနေရာလေးကို ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ ခပ်ဖိဖိ လေးပွတ်ဆွဲလိုက်တော့ သူ့ မျက်လုံးလေးတွေပငွ့်လာတယ် …ရီဝေတဲ့မျက်လုံးလေးတွေနဲ့ ကျွန်နော် ကိုကြည့်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်….ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို အသာလှဲပေးလိုက်ပီး သူ့အပေါ်ကနေ တက်လိုက်တယ်..ပီးတော့ အိန်ဂျယ် ရဲ့ တီရှပ်လေးကို ခါးနားကနေမ ပီး ချွတ်လိုက်တယ် …။ သူ့ရဲ့ဘော်လီ အမဲရောင်လေးက ကျွန်နော့်ကိုကြိုဆိုနေတယ်… ဘော်လီချိတ်ကို ဖြုတ်မယ်လုပ်တော့ သူက ခါးလေးကော့ပေးလိုက်တယ်…ဘော်လီကြိုးလေးကို ကျွန်နော်ကပဲဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။
အိန်ဂျယ် ရဲ့ ရင်နှမွှာကို ကျွန်နော်စတွေ့လိုက်ရတယ် …ပက်လက်လှန်အနေအထားနဲ့အိပ်နေတာတောင်း အိန်ဂျယ် ရဲ့ ရင်နှစ်မွှာ က တင်းပီး ဖောင်းကားနေတယ် …နို့သီးခေါင်းလေးတွေက နီညိုညိုလေးနဲ့ အတွင်းဘက်ကိုချိုင့်ဝင်နေတယ် ..ကျွန်နော်လည်းဘယ်လို မှ မနေနိုင်တော့ဘူး…နို့သီးခေါင်းလေးကို ဆွဲစုတ်လိုက်တာပေါ့…အိန်ဂျယ် က ကျွန်နော့် ခေါင်းကိုဆွဲကိုင်ပီး ဆံပင်တွေကို ဖွနေတယ် …လက်တဖက်က လည်း ကျန်တဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးကို ဖွဖွလေး ဖိချေပေးလိုက်တယ် … “အင်းးးးဟင်းးးး ကိုရယ်…. ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ …ဖြူမနေနိုင်တော့ဘူး” အိန်ဂျယ် ရဲ့ညည်းသံလေး ပထမဆုံးထွက်လာတယ်….သူ့ရဲ့ညည်းသံလေးကြားရတော့ ကျွန်နော်နို့တွေကို ပိုပီးတအားစုတ်ပေးလိုက်တယ် …ငါးမိနစ်လောက်နို့တွေစို့ပေးလိုက်ပီးတော့ ကျန်ွနော် အောက်ကို လျောချလိုက်တယ် …ပီးတော့ ကျယ်သီးလေးသာဖြုတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီလေး ကိုဇစ်ကိုအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ် …။
ဘောင်းဘီခါးစလေးကိုကိုင်ပီး ချွတ်မယ်လုပ်တော့ သူက ဖင်လေးကိုအသာလေးကြွပေးလိုက်တယ် …ဖင်လေးကြွပေးတာတောင် ဘောင်းဘီက ကြပ်နေတယ်…သူ့ရဲ့တင်ပါးတွေကို ဂျင်းဘောင်းဘီက ဆွဲယူနေတယ် …နောက်တော့ သူကပါ…လက်ကလေးနဲ့ဘောင်းဘီလေးကို ဆွဲချပေးလိုက်တယ်…. အောက်ခံဘောင်းဘီလေးက ဘော်လီနဲ့ ဆင်တူစွာပဲ အနက်ရောင်လေး…တံဆိပ်တောင်တူမယ်ထင်တယ် …အောက်ခံလေးကို မချွတ်သေးပဲ အပေါ်ကနေစမ်းကြည့်လိုက်တယ် …အရည်လေးတွေစေးစေးလေး စို့နေပီ…. ကျန်ွနော်လည်း မနေနိုင်တော့ဘူး..အောက်ခံလေးကိုအသာလေးလိပ်ပီးဆွဲချွတ်လိုက်တယ် ..ခုန ကလိုပဲ ကြပ်နေလို့သူက ဖင်လေးကြွပေးလိုက်မှ အဆင်ပြေသွားတယ် …။ အမွှေးရေးရေးလေးနဲ့ ဖောင်းကားနေတဲ့အဖုတ်လေးပါ တော်တော်လေးချစ်ဘို့ကောင်းတယ်ဗျာ …အမွှေးလေးတွေက မတိုမရှည်လေးပေါက်နေတယ်ဗျာ …ရှမ်းစပ်ကလေး အသားကဖြူတော့ အဖုတ်လေး က လည်းသိပ်မမဲဘူး …။
နိုင်ငံခြားမတွေလိုတော့ဖြူပီးရဲမနေဘူး …. နုတ်ခမ်းသားလေးတွေက နဲနဲ ညိုတာလောက်ပဲရှိတယ်ဗျာ … ကျွန်နော် လျှာဖျားလေးနဲ့ အဖုတ်လေးပေါ်အုပ်လိုက်တယ် ..နှာခေါင်းဝမှာ အဖုတ်နံလေးဝင်လာတယ်.. အဖုတ်နံဆိုတာရေးပြလို့တော့မတက်ဘူးဗျာ …နမ်းဖူးတဲ့သူတိုင်းတော့သိလိမ့်မယ်…အီသလိုလိုလေး ကျွန်နော်လည်း အကွဲကြောင်းလေးတလျောက်ကွဲကို လျှာနဲ့ စုန်ဆန်ဆွဲပစ်လိုက်တယ်… “အားးး..ကို ရယ်….ကျင်လိုက်တာ …ဖြူမနေတက်တော့ဘူး….” “ဖြူ့ ကိုကောင်းအောင်လို့လုပ်ပေးတာပါ …ကောင်းတယ်မလားး” အိန်ဂျယ် လို့တော့မခေါ်တော့ဘူး..သူမှမသိတာ ..ကျွန်နော့်စိတ်ထဲက ပဲခေါ်နေခဲ့တာလေ …နောက်မှပဲ သူ့ကိုပြောပြပီး ပြောင်းခေါ်တော့မယ် …အခုတော့ သူ့ကိုယ်သူပြောသလိုပဲ “ဖြူ” လို့ပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်… “ကောင်းတာလားတော့မသိဘူး ..ကျင်လိုက်တာ …ရင်တွေလည်းတုန်တယ် ကို ရယ်” “အဲ့ဒါ ကောင်းတာလေ… ”။
ကျွန်နော်ပြောပီး အဖုတ်ကို ဆက်ယက်ပေးနေလိုက်တယ် …ဖြူ့ပေါင်တွေက ကားလားပီးတော့လက်တွေက ကျွန်နော့် ခေါင်းကို ဆွဲကိုင်ထားတယ် “အင်းဟင်းရှီးအား” “အားကောင်းလိုက်တာ” ဖြူ့အဖုတ်တလျောက်လျာကိုစုန်ဆန်ဆွဲလိုက် …အစိလေးကို လျှာနဲ ထိုးလိုက်နဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး လုပ်ပစ်လိုက်တယ်…ဖြူ့ ရဲ့ အဖုတ်အရည်ကြည်လေးတွေလည်းထွက်လာတယ် …ပါးစပ်ထဲမှာတော့ ငံကျိကျိ နဲ့ပါ… ဒါပေမယ့် ဆက်ယက်နေလိုက်တယ် …ဖြူ့ဆီက ညည်းသံကြားလေလေ ယက်လို့ကောင်းလေလေဖြစ်နေတယ်…. ။ “အားရှီးကိုရယ်ကောင်းလိုက်တာ မနေနိုင်တော့ဘူး…အား” ဖြူအဖုတ် အဖတ်လေးနှစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ အသာလေးဟလိုက်ပီး လျှာကိုအတွင်းထဲထိ ထိုးထဲလိုက်တယ် …ကျွန်နော့် သွားရည်တွေကလည်း အဖုတ်မှာ ပေကျံလာပီး ..အောက်ကိုစီးကျကာ ဖြူ့ဖင်ပေါက်လေးထိစိုသွားတယ် “အား…ကောင်းလိုက်တာကိုရယ်…လုပ်ပါ မြန်မြန်လေးကြမ်းကြမ်းလေးယက်ပါနော်…။
အားးးးရှီးးးးကောင်းလိုက်တာ ကျွန်နော်သိလိုက်ပီ …သူပီးတော့မယ်လို့…ဒါနဲ့ ကျွန်နော်လည်းယက်နေတာကိုရပ်လိုက်တယ်…သူ့ကိုစပ်တငင်ငင် ဖြစ်သွားအောင်လို့ ဒါမှ အမုန်းကျဲ လို့ရမှာလေ… “အားးးးကိုရယ် ဘာလို့ရပ်လိုက်တာလဲ ” ကျွန်နော် ကုတင်ဘေးမှ မက်တပ်ရပ်လိုက်တယ် …“ “ဖြူ့အလှည့်လေ…” “ဟင်…ဘာကိုလဲ….ဖြူကဘာလုပ်ရမှာလဲ” “ကို့လီးကိုစုပ်ပေးလေ…ကိုယ်လည်းစုတ်တာခံချင်တာပေါ့…ဖြူ့ကိုလည်းကိုစုတ်ပေးယက်ပေးတာလေ အခုဖြူ့အလှည့်ပေါ့ ” ကျွန်နော်ပြောလိုက်တော့ အိန်ဂျယ် က အင်တင်တင် ဖြစ်သွားတယ် …ကျွန်နော့်လီးကို လှမ်းကြည့်နေတာ …ငပဲကလည်းထောင်နေတာမှမတ်လို့ …ကျွန်နော့်လီးက အရမ်းအကြီးကြီးတော့လည်းးမဟုတ်ပါဘူး … နဲနဲတော့ရှည်တယ်… “ဖြူ…မလုပ်ရဲဘူး…ကို ရှက်တယ် …ကြောက်လည်းကြောက်တယ်…” “ဘာကိုရှက်တာလည်း …ဖြူကိုတောင် ကို ယက်ပေးသေးတာပဲ…ဘာကိုကြောက်နေတာလဲ ” “ဖြူရှက်တယ် ကိုရယ် …ဖြူကို လိုးပဲလိုးပါနော်” ။
တော်ပီကွာ…ဖြူမစုတ်ချင်ရင် ကို လည်း ပြန်တော့မယ် …ဖြူ့ကိုတော့ ကောင်းအောင်လုပ်ပေးခဲ့တာ ကိုယ့်ကိုတော့ မလုပ်ပေးချင်ဘူး…ဖြူက မချစ်တာပေါ့ “မဟုတ်ပါဘူးကိုရယ်…ဖြူချစ်ပါတယ် …ကိုခံချင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်ပေးပါမယ် …လုပ်တော့မလုပ်တက်ဘူးနော် …ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲပြောပြ” ကျွန်နော် အကြပ်ကိုင်လိုက်တော့မှ အဆင်ပြေသွားတယ်..ကျွန်နော်ပြန်မှာကိုတော့မလိုလားဘူးလေ…သူလည်းထန်နေပီ…အလိုးခံချင်နေပီလေ.. ဖြူက ကျွန်နော့်လီးကို မရဲတရဲ ကိုင်လာတယ်..ကျွန်နော်လည်း ရှေ့ကိုတိုးပေးလိုက်တယ် ..။ ကျွန်နော်က ကုတင်ဘေးကနေမက်တပ်ရပ်..သူက ကုတင်ပေါ်မှ ထိုင်ပီးတော့ပေါ့.. ကျွန်နော့် ဥနှစ်လုံးကိုလာကိုင်တယ် …ပီးတော့ ပွတ်နေတယ်..ကျွန်နော့်လီးက လည်းစောက်ရမ်းကို တောင်နေပီ “ဖြူ…လီးဒစ်လေးကို ဖြဲလိုက်ပီးစုတ်လိုက်လေ… ပီးတော့လီးထိပ်ကိုလျှာနဲ့ယက်လိုက် နော် ” “အင်….ကို့ကို ချစ်လို့နော်…လုပ်ပေးမယ်” “အင်းပါ…သိပါတယ်ဖြူရယ်…”။
ဖြူက ရှေ့မှာဝဲကျနေတဲ့ သူ့ဆံပင်လေးတွေကိုသပ်တင်လိုက်ပီး ကျန်တဲ့လက်နဲ့ ကျွန်နော့်လီးကိုဖြဲလိုက်တယ်…ပီးတော့နူတ်ခမ်းလေးဆူပီး တစ်ချက်နမ်းလိုက်တယ်…ကျွန်နော် အသည်းတွေယားသွားတယ် …လီးကလည်းတဆက်ဆက်တုန်လို့ …ဖြူရဲ့ချစ်စရာ နုတ်ခမ်းလေးနဲ့ အနမ်းခံရတော့မယ်ဆိုတာ သိတော့ ရင်တွေတောင်ခုန်လာတယ်…အစက ကျွန်နော် ဒီလိုတွေလုပ်ဘို့ မစဉ်းစားထားဘူး…လိုးရုံလိုးဘို့လုပ်တာ …အခုမှစိတ်ပါလာပီးတောင်းဆိုကြည့်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားတယ် ဖြူက လျှာလေးထုတ်လာပီး ကျွန်နော့လီး အပေါက်လေးကိုလာတို့လာတယ်..ပီးတော့ အပေါ်ကိုမော့ပီး ကျွန်နော့် ကိုပြုံးပြနေပြန်တယ် “လုပ်တော့လေဖြူ…ကို လည်း မနေနိုင်တော့ဘူး…လီးကိုပါးစပ်ထဲထည့်ပီးစုတ်လိုက်တော့နော်” “အင်း…” ဖြူက ကျွန်နော်ပြောလိုက်တော့မှ ပါးစပ်လေးဟပီး လီးဒစ်လေးမြုပ်ရုံငုံလိုက်တယ် ..ပီးတော့လဒစ်ကို စုတ်ယူနေတယ် …မလုပ်တက်လုပ်တက်နဲ့လုပ်နေတော့။
ကျွန်နော် မှာ ပို ထန်လာတ.ယ် “ဖြူ..လီးကိုပါးစပ်ထဲမှာ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်လိုက်နော် …လျှာနဲ့လီးထိပ်ကို ကလိပေး” “ဟုတ်” ပါးစပ်ထဲက လီးကိုချွတ်လိုက်ပီး ..ဟုတ် တစ်လုံးပြောကာ ပြန်ငုံနေတယ်…ပီးတော့မှ ကျန်ွနေပြောသလို လီးကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်နဲ့မှုတ်တော့တယ်.. ။ “အားးးဟုတ်တယ်ဖြူ…အားးးကောင်းလိုက်တာ” ကျွန်နော်လည်း ဖြူခေါင်းကိုကိုင်ပီး ပါးစပ်ကိုလိုးသလို လုပ်တော့တယ်…နဲနဲ ကြာလာတော့ အရှိန်ရလာတယ်ထင်တယ် ဖြူရဲ့ ပါးစပ်ကလည်းမြန်လာတယ်…ကျွန်နော်ကလည်း ပါးစပ်ကို စောင့်စောင့်လိုးတာ..တချက်တချက် ..အာခေါင်ကိုရောက်ရောက်သွားတယ် ဖြူက လက်တစ်ဖက်က လီးကိုကိုင်ထားပီး ကျန်တစ်ဖက်က ကျွန်နော့် ဥတွေကို ပွတ်နေတယ် …ကောင်းလိုက်တာပြောမနေနဲ့ဗျာ… “အားးးးကောင်းလိုက်တာဖြူရယ်…ကိုယ်ပီးသွားလိမ့်မယ်…လိုးကြရအောင်နော်….” ကျွန်နော်ပြောတာ ကို မကြားသလိုနဲ့ လီးကို သဲကြီးမဲကြီးစုတ်နေတော့တယ် …။
ကျွန်နော် က ပါးစပ်ထဲမှာ မပီးချင်သေးဘူး…လိုးချင်သေးတာ…ခနနေတော့ ကျွန်နော်က နောက်ကိုဆုတ်လိုက်တော့မှာ ပါစပ်ထဲက လီးက ထွက်လာတော့တယ် “ကိုကလည်း စုတ်ခိုင်းတော့လည်းသူပဲ…တော်ချင်တော့လည်းသူပဲ..ဖြူက စုတ်လို့ ကောင်းနေပီကို….” “ဒီထက်ကောင်းတာလုပ်ရအောင်လို့ အခုက ကောင်းလွန်းအားကြီးသွားရင် ဖြူ့ပါးစပ်ထဲမှာ ကို့သုတ်ရည်တွေထွက်ကုန်တော့မယ်…” “ထွက်ထွက်ပေါ့..ကိုကလည်း…ထွက်ရင်ဖြူသောက်လိုက်မှာပေါ့လို့” “အင်းပါ…ပီးရင်တိုက်မယ်…အခုလိုးရအောင်နော် ” မိန်းမတွေများ မစခင်ကသာ အင်နေကြတာ စလိုက်ပီးရင်သူတို့ကချည်းဦးဆောင်နေတော့တယ်… “ဟူုတ် …ဒါဆိုလည်းလိုးလေ…အရမ်းကြီးတော့မလုပ်နဲ့နော်…ဖြူက တစ်ခါမှခံဖူးတာမဟုတ်ဘူး…ပီးတော့ ကို့လီးကြီးက ရှည်လိုက်တာ …ဖြူကြောက်တယ်” “အင်းပါဖြူရယ်…ဖြူ့ကို ကောင်းအောင်လုပ်ပေးမှာပါ…ခုန က စောက်ပတ်အယက်ခံရတာထက်ကောင်းစေရမယ် ”။
“ဟုတ်..ဖြူ ဘယ်လိုနေရမလဲဟင်…လှဲလိုက်မယ်နော်” “ဖြူ လေးဘက်ကုန်းလိုက်လေ….ကိုဒီအောက်ကနေလိုးမယ်နော်” “ဟူတ်…” ဖြူက လေးဘက်ထောက်ကုန်းလိုက်တယ်..ဖင်သားလေးတွေကလည်းဖွေးဥနေတယ်…ဖင်ဝလေးနဲ့စောက်ဖုတ်နေရာ လေးက ပဲညိုညိုလေးဖြစ်နေတယ်…လေးဘက်ထောက်လိုက်တော့ စောက်ဖုတ်လေးက နောက်ကိုပြူထွက်လာတယ် … လက်တဖက်က လီးကိုကိုင်လိုက်ပီး ..ဖြူတင်ပါးလေးကိုနောက်တဖက်နဲ့ ပွတ်လိုက်တယ် …တင်းတင်းလေး….တင်သားလေးတွေကို ပွတ်ရင်း စောက်ပတ်ကိုနှိုက်လိုက်တယ် …လီးစုပ်နေတုန်းအချိန်နဲနဲ ကြာသွားတော့ …သူစောက်ပတ်လေးက နဲနဲ ပြန်ခြောက်နေတယ်…။ ဒါနဲ့ ကျွန်နော်လည်း ..စောက်ခေါင်းထဲကိုလက်ခလယ်လေးနှိုက်ပီး ကလိပေးလိုက်တယ်…ဖြူက ဖင်လေး ရမ်းခါသွားအောင်လှုပ်သွားတယ်…စောက်ပတ်တပြင်လုံးကိုလည်း လက်နဲ့ ပွတ်ဆွဲေ ပးလိုက်တယ် “အားးးးရှီးးးးးးကောင်းလိုက်တာကိုရယ်…လုပ်ပါတော့နော်..ဖြူ မနေနိုင်တော့ဘူး”။
ဖြူ့ဆီက အသံကြားလိုက်ရတယ်…အတော်ထန်နေပီလေ…ကျွန်နော်လည်း လီးကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ဂွင်းတိုက်လိုက်ပီး…ဖြူစောက်ပတ်ဝမှာတေ့လိုက်တယ်…ကျန်ွနော့်လီးဆို တဆက်ဆက် ကို တုန်နေတယ် …ပီးတော့စောက်ပတ်လေးကိုလီးနဲ့ နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ဆွဲပွတ်လိုက်ပီးစောက်ခေါင်းထဲ ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ “အားးးနာတယ်ကို ..ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ…အားးးး” “ခန ပါ ဖြူရယ် ပီးရင်ကောင်းလာမယ်နော်…” ကျွန်နော်လည်းဖြေးဖြေးချင်းထိုးထည့်လိုက်တယ်…စောက်ပတ်က ကြပ်နေတာပဲဗျာ …တော်တော်သွင်းယူရတယ်..လီးတစ်ဝက်လောက်ဝင်သွားတော့ဖြေးဖြေးချင်းအထုတ်အသွင်းလုပ်ကြည့်လိုက် တယ်…တဖြေးဖြေးနဲ့ သူလည်းကောင်းလာတယ်ထင်တယ်…အရည်တွေလည်းထွက်လာတယ်…ကျွန်နော်လည်း တိုးလို့ရသလောက်ရှေ့တိုးပီးလိုးတယ် “အားးးးးရှီးးးးးကောင်းလာပီ ကို မနာတော့ဘူး…လိုးနော်ကို ….မြန်မြန်လေးလိုးပေးတော့နော်” နောက်ဆူံးကျွန်နော့်လီးက အဆုံးထိဝင်သွားတယ် …။
အရည်တွေက လည်းထွက်နေတော့လျောလျောလေးဖြစ်လာတယ် …လီးနဲ့ အဖုတ်ကြားမှာ ဖြူဖြူတွေဖြစ်လာတယ်…စီးတွဲတွဲနဲ့ အရှိန်ရလာကြတယ်…။ သူကောကျွန်နော်ကော ကောင်းလာကြပီ “ဘွတ်…ဘွတ်…ဘွတ်…” “ဖုတ်…ဖုတ်…ဖက်…ဖက်…” ကျွန်နော့် ပေါင်နဲ့ ဖြူ့ တင်ပါးနဲ့ ရိုက်သံတွေဆူညံ့ထွက်လာတယ်..တည်းခိုခန်းက လုံတော့မကြားရလောက်ဘူးအပြင်က ..ကျွန်နော်လည်း အသားကုန်ဆော်တော့တယ်….ဖြူ့ခါးလေးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ပီးနောက်က နေညှောင့်လိုက်တာ ဖြူကလည်း ရှေ့ကနေ ဖင်ကြီးကို နောက်ကို တွန်းတွန်းပေးနေတယ်… နှစ်ယောက်သားစည်းချက်ညီလာတော့တယ်… “အားးးးးးးးးကောင်းတယ်ကို…လုပ်နော် ….မြန်မြန်လေး လိုးပေးနော်…ဖြူကောင်းနေပီ” “အင်းးးးကိုလည်းကောင်းနေပီ…“ “ဖက်…ဖက်…ဖက်…” “ဘွတ်..ဘွတ်..ဘွတ်…” “အားးးးးရှီးးးးးးးးးကောင်းတယ်…ကောင်းတယ်ကို …လုပ်လုပ်” ဖြူစောက်ဖုတ်နုတ်ခမ်းသားတွေက ကျွန်နော့်လီးကို ဆွဲဆွဲယူနေသလိုခံစားနေရတယ်… တင်ပါးကြီးတွေကလည်းနောက်ကို စောင့်စောင့်ပေးနေတော့တယ်….။
အရှိန်ရလာတော့ ကျွန်နော်လည်း ဖြူ့ကို ကုတင်ပေါ်ကနေဆွဲချလိုက်ပီး အောက်မှာ မက်တပ်ရပ်ခိုင်းလိုက်တယ်…ပီးတော့လက်ကို ကုတင်မှာထောက်ခိုင်းလိုက်ပီးနောက်ကနေ စောင့်လိုးနေမိတော့တယ်….လက်တဖက်က နို့တွေကိုလှမ်းကိုင်လိုက်ပီး … ကျန်တစ်ဖက်က ခါးကိုကိုင်ထားပီး နောက်ကနေစောင့်လိုးတယ်..ဖြူရဲဖင်ဆုံကြီးတွေကလည်း ကျွန်နော့် ပေါင်ကိုပြေးပြေးစောင့်နေတယ်.. “ဖက်…ဖက်…ဖက်…” “အားးးးကောင်းတယ်ကို…လိုးနော်” လက်တွေကို နို့ပေါ်ကနေလွှတ်လိုက်ပီး …ဖြူ့တင်ပါးကြီးတွေကိုညှစ်ကိုင်လိုက်တယ်… တင်ပါးတွေကို ညှစ်ကိုင်ထားပီးတအားစောင့်လိုးပေးနေမိတယ်…ဖြူ့တင်ပါးမှာ ကျွန်နော်ညှစ်လိုက်လို့ ရဲတက်လာတယ် …။ အသားဖြူနေတော့ ပိုပီးသိသာလာတယ်..ဖြူကလည်း ထန်နေတော့ ဘယ်လောက်ညှစ်ညှစ် ခံနေတယ်….စောက်ဖုတ်နူတ်ခမ်းသားတွေက လီးဝင်လိုက်ရင်လိပ်ပီးစောက်ခေါင်းထဲပါပါသွားပီး ..လီးပြန်ထုတ်လိုက်ရင် ..အပြင်ကို ပြန်ပါပါလာတယ်…။
ကျွန်နော့်လီးက ရှည်တော့ အတွင်းက သားအိမ်နံရံကိုထိုးထိုးစောင့်နေတာကိုခံစားနေရတယ်… “အား…..ကောင်းတယ်..လိုးးလိုးးး..ကောင်းတယ်ကိုရယ်…“ “ဖတ်..ဖတ်…ဖတ်…” မိနစ် ၂၀ လောက်ဆက်တိုက်စောင့်လိုက်တာ ကျွန်နော်လည်းပီးချင်လာပါတယ်..ဖြူကတော့ ဘယ်နှစ်ခါပီးပီလဲတော့ မသိဘူး…စောက်ဖုတ်ကတော့ တော်တော်လျောနေပီ..အရည်ကြည်တွေလည်းထွက်နေတာသိတယ်…လီးသွင်းလိုက်တိုင်းအရည်တွေကြောင့် လျောလျောလေးဖြစ်နေတာသိနေတယ်…ကျွန်နော် အားရပါးရ ဆယ်ငါးချက်လောက်စောင့်လိုက်ပီးတော့ လီးကို အပြင်ထုတ်လိုက်ပီး ဂွင်းတိုက်လိုက်တယ် …ဖြူ့ ရဲ့ဖွေးဖွေးဥဥ တင်ပါးပေါ်ကို လရည်တွေ အပြစ်လိုက်အခဲလိုက်ပန်းထုတ်လိုက်တယ်…ဖြူ့စောက်ဖုတ်ထဲမှာ မထုတ်ရဲဘူးလေ…တော်ကြာဘိုက်ကြီးလာရင် စောက်ပြဿနာ ရှင်းရတော့မှာ …ဖြူလည်း ကုတင်ပေါ်ကို မှောက်ကျသွားတယ်…။
ကျွန်နော်လည်း ဖြူ့ဘေးမှာဝင်လှဲလိုက်ပီး နုတ်ခမ်းလေးကို အသာလေးဆွဲစုပ်လိုက်တယ်… ကျွန်နော်တို့ခဏလောက်တော့ အနားယူမှဖြစ်မယ်လေ…ပီးရင်တော့ဆက်ကဲရဦးမယ်…ကျွန်နော်နာရီကြည့်လိုက်တော့ ည နှစ်နာရီကျော်နေပီ….အဲ့ဒီညက ကျွန်နော်တို့ လေးချီလောက်ဆွဲလိုက်ကြတယ်… ညပိုင်းမှာသုံးချီဆွဲလိုက်တယ် မနက်မိုးလင်းတော့ တစ်ချီဆွဲလိုက်တယ်…ဖြူ့ပါးစပ်ထဲမှာ တစ်ကြိမ်ပီးလိုက်တယ်..ဖြူကလည်း ကျွန်နော့်သုတ်ရည်တွေကို မျိုချလိုက်တယ် …သူလည်း ကာမ ကြောမှာ နစ်မျောသွားပီလေ…ကျန်တဲ့အချီတွေတော့ ဖြူ့ရဲ့တင်ပါးပေါ်နဲ့ ဆီးစပ်ပေါ်မှာပဲထုတ်လိုက်တယ် …ဖြူလည်းနားလည်တယ် …သူ့အတွက် ကျွန်နော် အပြင်မှာထုတ်ရတယ်ဆိုတာ နားလည်တယ်လေ….ဒါကြောင့်တစ်ကြိမ်ကို ပါးစပ်ထဲမှာ ထုတ်ရအောင်လုပ်ပေးတာထင်ပါတယ်… အဲ့ဒီညက မနက်ငါးနာရီလောက်မှ မှေးခနဲ နှစ်ယောက်သားအိပ်ပျော်သွားကြတယ် …နှစ်ယောက်လုံးကိုယ်လုံးတီးနဲ့ ပဲအိပ်လိုက်ကြတယ်…ပြီးပါပြီ။